Wednesday September 08, 2021 - 23:47:10 in Wararka by Super Admin
Dhinaca fur-furnaanta, dimuqaradiyada, doorashooyinka iyo koboc dawladnimo rajo mustaqbal oo wanaagsan yeelan karaysay Gobolka waxa ka baxayey shamac kaliya oo Somaliland buu ahaa, kaasi oo aduunku tusaale ka dhigtay guud ahaan Africa iyo gobolkaba loogu soo qaato xaga doorashooyinka , yagleelka dawladnimo laga soo bilaabay dadka oo wada hubaysan ilaa doorashooyin qof iyo cod ah soo gaadhay.
Somaliland wax ba badani iskama badelin xaga nidaamka siyaasadeed ee dalka , doorashooyin badan oo la filayeyna waa qabsoomen inkastooy mudo dhaafeen laakiin sida kale dalku wuu socday oo horumar waa jiraa dhaliisha uu doono ha lahaado e wax badana waa is badeleen mid dawladeed iyo mid shacbiba , hadii laga tegi waayo hal qodob ayaa jira oo ku cusbaa 10 kaa sanadood;
1- waxa dalka Sudan kala noqday laba dal koonfurta Sudan iyo Sudan sanadkii 2012kii oo waxaa wax ka badelmeen khariirad ahaan dalkii sudan.
Djibouti iyo Erateria waxba iskama badelin dalalkooda maamulkoodii walow guuxa dimuqaradiyad doonku jiro hadana hada waxba ma muuqdaan isbadelo ahi walow aan la saadaalin karin oo aduunku sidii hore aheyn sidoo kale dadka Gobolka ku noolina ay ogaadeen awooda shacabka iyo sida ay wax u badeli karaan.
Waxa jira xasilooni la'aan siyaasadeed , dagaalka nooca loo yaqaan xarbul wakaala ( proxy war ) oo guud ahaan Gobolka saameyn ku leh ay keentay hirdanada iyo loolanada dawladaha iyo siyaasiyiinta ee danaha ku fadhiya kaasi oo isaguna werwerkiisa leh.
1- Somalia waxa aan is leeyahay rajo wanaagsan bay leedahay waayo waxa ku raagtay dhibta, dagaalada , qaraxyada iyo wax badan oo dib u dhigey, intaasi marka lagu daro jiilka maanta kacay oo aad moodo iney baraarugeen oo arkey in aanu sii wadi karin farmaajo isweydiinaya ma sidan baan ku jireynaa? Halkee u socotaa Somalia? Sidii loo heli karaa dawladnimo dhab ah iwm waxa ay isweydiinta badani keentaa in xalka la helo oo halkaasi hore looga dhaqaaqo, waxaana suuragal noqon kara in ay dawlad adagi ka dhalato mustaqbalka '
5- Djibouti waxa markii 5naad soo istaagay Madaxwayne Geelle oo ku guuleystey sidaasna kaga mid noqdey madaxda Africa ugu cimriga dheer xaga talada isaga oo hada jooga 22 sanadood, walow aanu muuqan mucaarid adagi hadana lama saadaalin karo mustaqbalka dalkaasi waxaana suuragal ah in wax badani is badali karaan si lama filaan ah.